on August 05, 2016 Related - Aung San Suu Kyi For the record Shan Thandawsint
(သျှမ်းသံတော်ဆင့်၊ သြဂတ်စ်လ ၄ ရက် ၂၀၁၆)
UNFC (စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ) ခေါင်းဆောင်များအား ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆိုခဲ့သော မှတ်သားဖွယ်ရာ ဆွေးနွေးချက်များ
သျှမ်းသံတော်ဆင့်၊ သြဂတ်စ်လ ၄ ရက် ၂၀၁၆ (https://www.facebook.com/Panglong.burmese/)
ကျမကိုအခုလိုလာပြီးတွေ့တဲ့အတွက် အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုအတွက်လည်ူ ကျမတို့မျှော်လင့်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ တွေ့ဆုံခြင်းအားဖြင့်လည်း ကျမတို့အားလုံးအတွက် တိုးတက်မှုတွေ အကျိုးကောင်းတွေ ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီအထဲမှာ ဘယ်သူအသက်အကြီးဆုံးလဲ ? ဦးကျော်တင့်ဆွေ အပါအ၀င်ပေါ့။ ဦးကျော်တင့်ဆွေက ကျမထက် ၃ လငယ်တယ်။ ကျန်တဲ့ဧည့်သည်တွေကော ကျမထက်ကြီးတဲ့သူပါလား။
ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲင်က အသက်ဘယ်လောက်လဲ။ ၈၀ နှစ်။ ကျမထက် ကြီးတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အန်ဘန်လာကော၊ ၆၇ ဆို ကျမထက်ငယ်တယ်။ ကျမထက်ကြီးတာ တယောက်ပဲ ရှိတာပေါ့။
ကျမဘာဖြစ်လို့မေးလဲဆိုတော့ ကျမ ဒီအစည်း အဝေးမလာခင် ကျမ စဉ်းစားမိတယ်။ ကျမတို့အားလုံးမှာ ကျမတို့ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ တူညီချက်တခု ရှိတယ်။ ကျမတို့ ဘယ်လိုမှအမြဲနေသွားလို့ မရဘူး။ ကျမတို့သက်တမ်းဆုံးတဲ့အခါမှာ ကျမတို့ ဒီလောကကနေ ထွက်သွားရမှာပဲ။
ကျမတို့ဒီလောကကနေမထွက်သွားခင်မှာ အားလုံး စုပေါင်းပြီးတော့ နိုင်ငံ့ တိုးတက်မှု လုပ်သွားချင်တယ်။ အဲဒါ ကျမစိတ်ထဲ ရောက်လာတယ်။ ကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့အားလုံး လူငယ်တွေအပါအ၀င်ပေါ့၊ ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူး၊ လူငယ်၊ လူကြီး ဘယ်သူဟာ ဤလောကကြီးကနေ အရင်ထွက်သွားမလဲဆိုတာ တနေ့တချိန်တခါမှာ ကျမတို့ထွက်သွားရမှာပဲ။ ဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူး။
ကျမတို့အားလုံးတခြားကိစ္စတွေ NCA နဲ့ဘယ်လောက်ပဲငြင်းခုံခုံ၊ ဖက်ဒရယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်ပဲ ငြင်းခုံခုံ တူညီတဲ့ကိစ္စတခုကတော့ ကျမတို့ တချိန်ချိန်မှာ ဤလောကကနေ ထွက်သွားရမှာပဲ။ မထွက်သွားခင်မှာ ကျမညီညွတ်မှုကိုလိုချင်တယ်။ ကျမတို့အစဉ်အဆက် ကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ မျှော်မှန်း ခဲ့တဲ့ညီညွတ်မှုကိုရယူပြီးတော့ ထားပစ်ခဲ့ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ် ကျမ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တခုကျမစဉ်းစားမိတာ ဘာလဲဆိုတော့ ကျမတို့အားလုံးဟာ ဘာလဲ ဘယ်သူလဲဆိုတာ အရင်စဉ်းစား ရင်ကောင်းမလားလို့။ ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် ကျမအနေနဲ့ ကျမကဘယ်သူလဲဆိုတော့ ကျမဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်လို့ ပြောမှာလား၊ ကျမဟာ ကျမမိဘရဲ့သမီး ပြောရမှာလား၊ ကျမအဖေဟာ အညာသားဗမာစစ်စစ်၊ ကျမအမေဟာ ဧရာဝတီက မွန်သွေးပါတယ်။ ရခိုင်သွေး ပါကောင်း ပါမယ်။ ဘိုးဘိုးဘက်က ကျမသိပ်မသေချာဘူး။ သေချာတာကတော့ မွန်သွေးပါတယ်။ ကျမက မွန်မျိုးနွယ်လို့ခေါ်ရမှာလား။ အညာသားမျိုးနွယ်လို့ခေါ်ရမှာလား။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျမတို့ Identity အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတော့ ကျမက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်လို့ သတ်မှတ်ရမှာလား။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာလဲဘယ်လူလဲဆိုတာသတ်မှတ်တာ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါ Diversity ပဲ။
နောက်ဆုံးတော့ ဒိုင်ဗာစီတီအရင်လာသလား ယူနီတီလာတာလား။ Diversity of the unity ဆိုတာ ဒီမတူကွဲပြားမှုဆိုတာ ကျမတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ကျမတို့တယောက်ချင်း တယောက်ချင်းအတွင်းမှာကို မတူကွဲပြားမှုတွေ အစုံရှိပါတယ်။
ဥပမာဆို ကချင်။ ကချင်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဆိုလို့ ကိုယ့်ရဲ့ Identity ပဲ။ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဆိုလဲ မတူတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေ ရှိတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဆိုတာလဲမတူတဲ့အရပ်ဒေသက လာတာရှိတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့မိဘက မတူညီတဲ့အခြေအနေတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီလိုအမျိုးမျိုးမတူညီတာ တွေရှိတယ်။
ကျမစဉ်းစားမိတာကတော့ တကယ်ကြီးတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေ ခိုင်ခံ့တဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေဆိုတာ အမြစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီအမြစ်တွေအများကြီးစုစောင်းပြီးတော့မှ ခိုင်ခံ့တဲ့အပင်ကြီးတခု ဖြစ်လာတာပါ။ အမြစ်တခုတည်းရှိတဲ့အပင်တွေဟာ မခိုင်ခံ့ပါဘူး။
ဥပမာဆိုရင် မုန်လာဥ ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ပါသွားတာပဲ။ သူကအမြစ်က တခုတည်း ရှိတယ်။ တကယ်တော့ မြစ်မ ပင်မတခုတည်း ရှိတယ်။ နည်းနည်းလေးပေါ့။ တခြားအမြစ်သေးသေးလေးရှိရင် ရှိမယ်။ ဒီလိုအမြစ်ကြီးကြီးတခုတည်းရှိတာ မခိုင်ခံ့ပါဘူး။ ဆွဲနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင် တခါတည်းပါသွားတာပဲ။
ဒီလို Diversity ရှိတဲ့ အမြစ်တွေအများကြီးရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေသာ တကယ်ကို ခိုင်ခံ့နိုင်မှာပါ။ အဲဒီတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ Diversity of Strength ဆို ပြီးတော့ လက်တွေ့ကျကျ သဘာဝ အရ မှန်တယ်လို့ ကျမမြင်တယ်။ ကျမတို့ဘယ်သူမှ Identity တခုတည်းရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျမ ဒီဟာကို ဘာဖြစ်လို့လေ့လာလဲဆိုတော့ ကျမတို့တကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ Identity Crisis ပေါ့နော်၊ အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးအရ ကွဲပြားတာတွေ၊ အဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြင်သစ်မှာ ကြီးလာတဲ့ North Africa ကမူစလင်ဘာသာဝင်တယောက်က ရေးဖူးပါတယ်။
ဒီ Identity နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့။ လူတွေဟာ ကိုယ့်မှာ Identity တခုရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်လို့ ရှိရင် ပြဿနာ ဖြစ်တယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ Identity အများကြီးရှိတယ်။ ဒီဟာတွေ အားလုံးကိုသိမ်းသွင်းပြီးတော့ လက်ခံပြီးတော့ ကျော်လွှားနိုင်ရမယ်။ ဒီဟာတွေအားလုံးကို အင်အားဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ ကျမ ဒီဟာကို သိပ်ကို သဘောကျပါတယ်။
ကျမတို့အားလုံးဟာ ပြည်ထောင်စုသားတွေဆိုတဲ့ Identity ကိုလည်း ရှိစေချင်တယ်။ ကိုယ်သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ Identity ကိုလည်း ရှိစေချင်တယ်။ ကိုယ်ကိုးကွယ်ရာဘာသာဆိုတဲ့ Identity ကိုလည်း ရှိစေချင်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကလည်း လူမျိုးစုတခုတည်းကပဲ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ ဒီလိုမတူကွဲပြားတဲ့ Identity ကိုပေါင်းပြီးတော့ ပိုပြီးခိုင်ခံ့တဲ့အပင်ကြီးသဖွယ်ဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကိုထူထောင်တာဟာ ကျမတို့ခေတ်မှာ ကျမတို့ အသက်ရှင်ကာလမှာ ကျမတို့ထူထောင်သွားစေချင်တယ်။
ကျမတို့ ဒီမှာအမြဲရှိနေမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျမတို့ အသက် ၅၀ ကျော်လာတာနဲ့အမျှ သက်တမ်းတ၀က်ရောက်တဲ့သူက များပါတယ်။ အသက်တရာကျော်တဲ့သူက အခု နည်းနည်းတော့ များလာတယ်။ ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပျမ်းမျှခြင်းသက်တမ်းနဲ့ အမျိုးသားတွေ က ၆၃ နှစ်၊ အမျိုးသမီးတွေက ၆၅ နှစ်ဆိုတော့၊ ဒီမှာလည်း အမျိုးသားတွေဘက်က ၆၃ နှစ်ကျော် သွားပြီ၊ ကျမလည်း ၆၅ နှစ်ကျော်သွားပြီ၊ ကျမတို့မှာ ကျန်တဲ့သက်တမ်းအတွင်းမှာ ကျမတို့ ရေရှည်ထားပေးခဲ့ရမယ့် နောင်မျိုးဆက်တွေအတွက် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားပြီးတော့ ကျမတို့ပြောမယ်ဆိုမယ် ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် အခက်အခဲရှိမယ်မထင်ဘူးလို့ ကျမယုံကြည်ပါတယ်။
အဲဒါ့ကြောင့်မို့လို့ ဒီအချက်နှစ်ချက် မနေ့က စဉ်းစားတာပါ။ ဒီအစည်းအဝေးကျရင် ပွင့်ပွင့်လင်း ပြောရရင် အောင်မြင်ချင်စေတယ်။ အရင်တုန်းကမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဟာကို အောင်မြင်ချင်တယ်။ ဒီလိုအောင်မြင်မှုရအောင် ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ ကျမ အတွေးနှစ်ခု ၀င်လာတယ်။ တခုက အကန့်အသတ်မရှိတဲ့အချိန်မရှိဘူး။ ကမ္ဘာကြီးတောင်မှအကန့်အသတ်မရှိဘူးလို့ ပြောလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာကြီးလည်း တချိန်တခါ ပြီးသွားမှာပဲပေါ့နော်။ ကျမတို့တဦးချင်းတဦးချင်းမှာ အကန့်အသတ်မဲ့အချိန်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီရှိတဲ့အချိန်ကို တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်အောင်လို့ သုံးစေချင်တယ်။ ဒီရှိတဲ့အချိန်ကို သတ္တိရှိရှိနဲ့ အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် ကျမလုပ်ချင်တယ်။
နောက်ပြီးတော့ ကျမတို့အားလုံးဟာ Identity ပေါ့နော် အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ တခုတည်း ရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့ ကွာဟချက်တွေက အင်မတန်မှ နည်းသွား မယ်။ ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျမမေမေ က မွန် ဆိုတော့မွန်သွေးပါတယ်။ မွန်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်မှု လုပ်လို့ရတယ်။ ကျမအဘိုးက ခရစ်ယာန်ဆိုတော့ ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လို့ ရတယ်။ ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာက ဘာသာဆိုပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်။ တူညီတဲ့အပိုင်းတွေမှာ ကျမတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ ငါတို့အားလုံးဟာ မျှဝေနိုင်တာပဲဆိုတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ ပြဿနာတွေကို ကိုင်တွယ်မယ်ဆိုရင် ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် ချဉ်းကပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလို့ ကျမထင်ပါတယ်။
Identityနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျမ ကလေးမတယောက်အကြောင်းဖတ်ပြီးတော့ သူကလည်း ဒီလိုပါပဲ။ သူ့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေမနေတဲ့နိုင်ငံမှာ ကြီးလာရတော့သူ့ရဲ့ Identity ကို သူပြောပြေတော့Tangla Identity ပေါ့။ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ Identity ပေါ့။ သူဘယ်သူလဲဆိုတာ သူဆုံးဖြတ်ရတာ ရှုတ်ထွေးနေ တယ်။
ဒီလိုရှုတ်ထွေးမှုက ကျမတို့မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ Identity အားလုံးဟာ တန်းတူရည်တူ လက်ခံနိုင်တယ်။ သူတို့တွေဟာ သဟဇာတရှိရှိနဲ့ ရှင်သန်နိုင်တယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုး ဖြစ်စေ ချင်တယ်။ ပြည်ထောင်စုဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ။ အားလုံးဟာ အတူတူနေပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့မတူညီတဲ့ ကိစ္စတွေကို သဟဇာတဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာ ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ခြင်းပါပဲ။
အဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် ကျမတို့အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ ကျမယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကိုကျမတို့အနေနဲ့ ကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေက ဘာ့ကြောင့် ဒီ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင် ကျမတို့လည်း ဒီကိစ္စကို ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်။ ကျမတို့အနေနဲ့လည်း ကျမတို့ အမြင်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောပြမယ်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ ပွင့်လင်းဖို့ ဖြောင့်မတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဖြောင့်မတ်ဖို့ ပွင့်လင်းဖို့ဆိုတာကလဲ ဒါ ပထမလိုအပ်တဲ့ ယုံကြည်မှုပဲ။ ကိုယ်မယုံကြည်တဲ့သူနဲ့ဆို ပွင့်လင်းဖို့ အင်မတန်မှ ခက်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီသူဟာ ကိုယ့်ကို မကောင်းကြံမယ်လို့ ထင်ရင် သူနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အကြောင်း သိသွားတာကိုအခြေခံပြီးတော့ အခွင့်အရေး ယူမလား ဆိုပြီးတော့ ဒီလိုစိုးရိမ်မှုလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး တယောက်နဲ့တယောက် ပွင့်လင်းနိုင်ဖို့ အတွက် ဖြောင့်မတ်နိုင်ဖို့အတွက် အဲဒီ့အထိတော့ ယုံကြည်မှုရှိရမယ်။
ကျမတို့ဟာ တယောက်နဲ့တယောက် ဆွေးနွေးတဲ့အချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ တိုက်ခိုက်ဖို့ သုံးဖို့အတွက် မဟုတ်ဘူး၊ ကြားမှရှိနေတဲ့ပြဿနာကို ဘယ်လိုပြေလည်အောင် အဖြေရှာဖို့။ ကျမထပ်တလဲလဲ ပြောပါတယ်။ ပြဿနာဟာ ခက်တာမဟုတ်ဘူး။ အဖြေရှာမှာမို့ပဲ အရေးကြီးတာ။ ပြဿနာတော့ ရှိမှာပဲ။ အခုလည်း ရှိမှာပဲ၊ နောင်လည်း ရှိမှာပဲ။ ကျမတို့ပြည်ထောင်စုကြီးတည်တည်တံ့တံ့ရှိတဲ့အခါမှာလဲရှိမှာပဲ။ အဲဒီ့တော့ ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ နည်းကိုပဲ ကျမတို့ရှာဖို့ပါပဲ။ ပြဿနာကိုတော့ စိုးရိမ်ဖို့ မလိုပါဘူးလို့ ကျမအနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ NCA အခက်အခဲငြိမ်းချမ်းရေးပရောဆက်တွေရဲ့အခက် အခဲတွေကို ပြဿနာပါလို့ ဆိုမယ့်အစား ကိုင်တွယ်ရမယ့်ကိစ္စတခုဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ ၀ိုင်းပြီးတော့ အဖြေရှာပေးချင်ပါတယ်လို့ ကျမမနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
အခုကျမတို့ ဆွေးနွေးပြောဆိုသွားတဲ့အထဲမှာ ပင်လုံစာချုပ် NCA ဖက်ဒရယ်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေ အကြောင်းပါမယ်။ အချိန်ကာလအကြောင်းပါတယ်နော်။
ကျမတို့ အချိန်ကာလ အရင်ကြည့်ရအောင်၊ အချိန်ကာလ အကန့်အသတ် တခုလိုတယ်လို့ ဘာကြောင့်ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ရသလဲဆိုရင် တခြားနိုင်ငံကနေရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ကျမတို့ကြည့် ပြီးတော့ ပြောတာပါ။ တခြားနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်တွေကိုစတဲ့အခါမှာ အချိန်အကန့်အသတ်မရှိထားလိုက်တဲ့အခါမှာ အလုပ်ကိုမပြီးဘူးဆိုတာ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဥပမာဆိုရင် အထူးသဖြင့် မြောက်အိုင်ယာလန်နဲ့ပတ်သက်လို့ ထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်ခဲ့တဲ့ Jonathan Powell တို့ဆိုရင်သိဖူးကြမှာပါ။ သူပြောခဲ့တာက သူတို့ ပထမပိုင်းမှာ ဘာမှားသွားလဲဆိုတာက အကန့်အသတ်မရှိ အချိန်ကိုထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ အလုပ်မဖြစ်ဘူးတဲ့။ သူတို့အရင်တုန်းက ထင်ခဲ့တာက အရင်တုန်းက အကန့်အသတ်မရှိ ပြောချင်တာပြော ဆွေးနွေးချင်တာ ဆွေးနွေးဆိုလို့ ရှိရင် ပြဿနာတွေပြေလည်သွားမယ်လို့ ထင်ပေမယ့် မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ပြဿနာတွေမဆုံးနိုင်ဘူးပဲ ဖြစ်သွားတယ်။ အဲတော့ အိုင်ယာလန်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အိုင်းရစ်ပြဿနာ စတာဟာ Cromwell တို့လက်ထက်ကတည်းက ထဲထဲဝင်ဝင်စတယ်ဆိုရင် အဲဒီမတိုင်မီကတည်းက အိုင်ယာလန်တို့ကနေသွားသွားပြီးတော့ ဒီမိန်းလန်းနားကနေပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်တွေ ကျူးကျော်တာ တွေဆိုတာ ၁၃ ရာစုလောက်ကတည်းက စခဲ့တဲ့ကိစ္စပါ။
တရားဝင် အိုင်ယာလန်ကိုဝင်သိမ်းလိုက်တာကတော့ Cromwell တို့ခေတ်မှာပေါ့နော်။ အဲဒီကနေ တွက်လာရင်တောင်မှ နှစ် ၃၀၀ ကျော်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လုပ်တယ်။ အဲတော့ နှစ် ၃၀၀ ကြာ မှာ ပြဿနာတခုဟာ သူ့ဘာသာသူ ပျောက်သွားလားဆိုတာ သူ့ဟာသူ မပျောက်သွားပါဘူး။ သူတို့ဆွေးနွေးယူရပါတယ်။ အဲတာ ကျမတို့ကိုသတိပေးလိုက်တာက အချိန်သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာ ရှိသင့်တယ်တဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူ့သဘာဝအလျောက် အချိန်ရှိရင် ရှိသလောက် ပြောမယ် ဆိုမယ် ငြင်းမယ်ခုံမယ်ပေါ့။ အဲတာကို အချိန်သတ်မှတ်ချက်တခုထားမှသာလျှင် ပြောမယ်ဆိုရင် အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပန်းတိုင်တခုထားရပါမယ်။ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်မှသာ ပန်းတိုင် ထားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ပန်းတိုင်တခုထားရမယ်လို့ ပြောတဲ့ဟာကိုလည်း ကျမ အမြဲမှတ်ထားပါတယ်။
တိုက်ပွဲနောက်တခုက ခုနက ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပြောသွားတဲ့အထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ အချင်းချင်းလည်း တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကတော့ အဲတာဟာ ကျမတို့အတွက် လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားစရာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လဲ။ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာ နိုင်ငံရေးသဘောထား မတူညီမှုကြောင့်ဖြစ်တာလား။ ရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေအတွက် လုကြတာ ပေါ့နော်။ မျှမျှတတ မခွဲယူနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်တာလား။ တခြားကိစ္စတွေကြောင့်ဖြစ်တာလား။ အပြင်ပယောဂကြောင့်ဖြစ်တာလား …စသည်ဖြင့်။
ဘာဖြစ်လို့ တိုင်းရင်းသားတွေကြားထဲမှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်သလဲဆိုတာကျမတို့ စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ အဓိကကတော့ ဗမာ့တပ်မတော်ပေါ့နော်။ နိုင်ငံ့တပ်မတော်ခေါ်မှာလား ရွေးရတာခက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဗမာအများစုပါနေတော့ ဗမာ့တပ်မတော်ပဲခေါ်ရမှာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်ခေါ်ပြန်တော့လည်း ဗမာလူမျိုးနဲ့ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေ တိုက်နေတယ် ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ ၀မ်းသာစရာကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဘယ်လိုပဲပြောပြော တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ဒီဟာကိုကျမတို့က မေးခွန်းမေးရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ အချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေရသလဲ။ ဘာကြောင့်လဲ။ မတူကွဲပြားမှုကြောင့်လို့ပြောသွားတဲ့အပေါ် မှာ ကျမတို့က ဖက်ဒရယ်သာအဖြေဆိုတာ လက်ခံထားပြီးသားပါ။
ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ရမယ်ဆိုတော့ အမှန်ပြောရင် ဒါ ကျမတို့ခေါ်လို့မရဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံလည်းဖော်လို့မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့အနက် အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ရမယ်ဆိုရင် ပညာရှင်များပေါင်းစုံ၊ နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီး ဖော်လို့မရပါဘူး။ တိတိကျ ကျဖော်လို့ မရပါဘူး။ အခုထက်ထိ ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းေ တွက တချိန်လုံး ထုတ်နေကြတာ။ တယောက်တမျိုးပေါ့။ နောက်ဆုံး ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဖက်ဒရယ်က ဘာလဲဆိုတာ ကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပဲဆုံးဖြတ်မှာ။ အမေရိကန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ဂျာမနီ နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ မတူပါဘူး။ ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကလည်း ဆွိစ္စလန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လည်း မတူပါဘူး။ မတူတာနဲ့အမျှ သူတို့ရဲ့ဖက်ဒရယ်တွေ ကလည်း တခုနဲ့တခု ကွာခြားပါတယ်။
ကွာခြားတဲ့အပေါ် ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းတာလဲဆိုတာကိုလည်း ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ အောင်မြင်နေကြတာပဲမတူကြဘူးပေါ့။ ကျမတော့ ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာ အရင်တုန်းကတော့ ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ၀ါဒဖြန့်မှုတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ ခွဲထွက်ရေး။ ကျမတို့အဖွဲ့က အမြဲတမ်း ဖက်ဒရယ်နဲ့ရပ်တည်ခဲ့တာကိုး။ အဲဒါကြောင့် NLD က ခွဲထွက်ရေးကိုလိုလားတယ်။ ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲအောင် လုပ်နေတာဆိုပြီး အဲ့ဒီတုန်းက ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့စကားသုံးရင် ဖမ်းတာဆီးတာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျမတို့တော့ ဖက်ဒရယ်ဆိုတာကို အမြဲသုံးခဲ့တယ်။ မူအရပေါ့။ ဖက်ဒရယ်ဆိုတာခွဲထွက်ရေးမဟုတ်မှန်း လူထုကို သိစေချင်လို့။ ဆိုတော့ ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို အရိုးသားဆုံးရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတနိုင်ငံ အတွင်းမှာ အာဏာကို ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရ၊ တိုင်းအစိုးရတွေကြားထဲမှာခွဲယူဖို့၊ ခွဲယူတဲ့စနစ်။ အဲဒီဟာ ဖက်ဒရယ်ပဲ။
ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ခွဲယူလည်းဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက သတ်မှတ်တယ်။
ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာချက် သုတေသနပြုချက်အရ ဖက်ဒရယ်စနစ် လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ခွဲထွက်ချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေက ကျဆင်းသွားတယ်။ ဒါကြောင့် ဖက်ဒရယ် ဆိုတာ ခွဲထွက်ချင်တဲ့စိတ်ကို အားပေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ ခွဲထွက်ချင်စရာအကြောင်းမရှိအောင် အဆောက်အအုံတခုကို တည်ဆောက်တာပဲဆိုပြီးတော့ ကျမတို့ဒီလိုပဲရှင်းပြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ကျမတို့နိုင်ငံနဲ့အသင့်တော်ဆုံး ဖက်ဒရယ်ပုံစံတခုကို သတ်မှတ်ပေးပါ မယ်။
ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံက ဖက်ဒရယ်ကရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ ညီလာခံတွေဘာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ Ceasefire မရခင် ညီလာခံလုပ်လို့သင့်တော်ပါ့မလား ခုနပြောတဲ့အတိုင်း အချိန်တိတိကျကျ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ NCA ဘက်ကို ပြန်လှည့် လာပါမယ်။
NCA ထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုတချို့ဟာတွေက သဘောမတူဘူး။ ဒါကြောင့် NCA ရေးဆွဲရေးမှာ ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ် မပါခဲ့ပါဘူး။ ကျမတို့ကဏ္ဍလည်း အင်မတန်မှသေးပါတယ်။ ကျမတို့ ကိုယ်စားလှယ် ၂ ယောက်ပဲ တက်ပါတယ်။ NCA နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျမတို့သဘောမတူခဲ့တာတွေ လည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကျမတို့တောင်းဆိုတာ တခုပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြုသာပြင်သာအောင်တော့ ထည့်ခဲ့ပါ။ အဲဒါမထည့်ခဲ့လို့ ကျမတို့လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါတောင်မှ ကျမတို့ လက်မှတ်မထိုးခဲ့ပါဘူး။ ပြည်ထောင်စုနေ့တုန်းကလေ။ မထိုးဘူးဆိုတာက ကျမတို့ကို နို့တစ်စ်မပေးဘဲနဲ့ လာပါ တက်ပါ လက်မှတ်ထိုးပါဆိုတော့ ကျမတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေက ထိုးခွင့် မရှိဘူးလေ။ တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင် NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံလုပ်မယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒီတိုင်းပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင် NCA က ဘယ်တော့လောက်မှ လက်မှတ်ထိုးနိုင်မလဲဆိုတာ ကျမတို့မှန်းလို့ရမယ်။ NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးမှ ဆက်ပြီးသွားဖို့ဆိုတာ အမှန်ပြောရင် ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်တုန်းက အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါကျမတို့ အမွေခံပါတယ်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အစိုးရတာဝန်ကိုယူတဲ့အဖွဲ့ဟာ အရင်အစိုးရလုပ်ခဲ့သမျှကိုတာဝန်မယူဘူးဆိုပြီး လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီ NCA ဆိုတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးက ကျမတို့အပေါ် ရောက်လာပါတယ်။ ကျမတို့ကထမ်းပြီး တတ်နိုင်သမျှပြေလည်အောင်လုပ်ရမှာပဲ။ အခွင့်အလမ်းတခုလို့ကျမမြင်သလို တိုင်းရင်းသားတွေကို မြင်စေချင်ပါတယ်။ NCA က ဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုပေမယ့် တချို့သော ဒက်ဖ်ှနေးရှင်း Definitions တွေက အဓိပ္ပာယ်ဖော်မှုတွေက မပြီးပြတ်သေးပါဘူး။ ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖော်မှုတွေက အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံး အဆင်ပြေစေ ရမယ်လို့ မပြော လိုဘူး။ အရင်တုန်းကကျမကိုဟို ဘက် ကလာကမ်းလှမ်းတုန်းက Calculated risk ယူလိုက်ပါဆိုသလို။ ၂၀၁၂ ကနေ မကျော်ဖြတ်နိုင်ရင် ၂၀၁၅ ကို ကျမတို့ရောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့အလျှော့အတင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလျှော့အတင်းလုပ်ပြီးတော့မှ အောင်မြင်အောင် လုပ်ရမှာပဲ။
ပင်လုံညီလာခံဆိုတာ ပင်လုံ Agreement အပေါ်မှာအခြေခံမှာလား။ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်အပေါ်မှာ အခြေခံတာလား။ ပင်လုံသဘောတူညီချက်ဟာ ယျေဘုယသဘောဆန်ပါတယ်။ တိတိကျကျရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အဓိကပါနေတာက ကချင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ ပါတာပါ။ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ အပိုဒ် ၅ အပိုဒ် ၆ နဲ့အပိုဒ် ၉ မှာ သေသေချာချာကို ကချင်ဆိုပြီးတော့ ဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။ ၈ မှာတော့ ရှမ်းကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရှမ်းကိုဖော်ပြထားရာမှာလည်း တကယ်တော့ General ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ (VIII) The arrangements accepted in this Agreement are without prejudice to the financial autonomy now vested in the Federated Shan States.
အဲတော့ without prejudice ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ် အမျိုးမျိုးဖော်လို့ရပါတယ်။ အဲတော့ ပင်လုံစာချုပ် အတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှ လိုတိုးပိုလျှော့တွေ အများကြီး လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေ ရှိပါ တယ်။ ဒါဟာ ကျမတို့အတွက် ပြဿနာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ပြဿနာက တကယ် ကျမတို့သဘော တူညီမှုယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘာမှပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။ ကျမက ပင်လုံစိတ်ဓာတ်လို့ပြောတာ ဟာ ပူးပေါင်းဆက်ဆဲရေး။ ပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့က စိတ်ဓာတ်ပဲယူရမယ်။ ဒီထဲမှာ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်း၊ ဗမာ ပါတယ်။ မွန်မပါ ကယားမပါ ။ မပါတာတွေ အများကြီးပဲ။ ဒါကြောင့် ကျမက ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကို အခြေခံပါလို့ ပြောတာ။ ပင်လုံစာချုပ်ကိုအခြေခံမယ်ဆိုရင် ကချင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရှမ်းနဲ့ပဲ ပြီးသွားရောလားဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နောက် ပင်လုံစာချုပ်ထဲက အတိုင်းလို့မပြောတာဟာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကို ကန့်သတ်ချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ပင်လုံစာချုပ်က ကျဉ်းလွန်းလို့ပါ။ ဒါ့ထက်ပိုပြီးတော့ ကျယ်ပြန့်ဖို့ ကျမတို့ လိုပါ တယ်။ တကယ့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ဖို့ ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့။
နောက်တခုက ဒီ Ceasefire တွေလုပ်မှ အားလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပြီးမှ ညီလာခံကို စနိုင်မယ်ဆိုရင် ညီလာခံဘယ်တော့စနိုင်မလဲ။ အဲတော့ အဲလိုဆိုလို့ရှိရင် ညီလာခံမဖြစ်မြောက်ချင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုတည်းကနေပြီးတော့ အားလုံးကိုပျက်စီးအောင် လုပ်လို့ရတယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုတာ ကျမတို့ဒီကိစ္စလည်း လေ့လာပြီးပါပြီ။ အပစ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်တွေထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက လပိုင်းအတွင်း ချိုးဖောက်တယ်။ ဒါတကမ္ဘာလုံးက အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်လိုက်တာ။ အဲတော့ ကျမအမြဲဘဲပြောတယ်။ အပစ်အခတ်ရပ် စဲရေးပျက်ဖို့ဆိုတာ ၁ စက္ကန့်ပဲ လိုတယ်။
ကျည်ဆံတတောင့်ထွက်ဖို့ဆိုတာ ၁ စက္ကန့်ပဲ။ ၁ စက္ကန့်တောင်မရှိဘူးထင်တယ်။ ကျမတော့ မကျွမ်းကျင်တော့ သိပ်မသိဘူး၊ သေနတ်တွေ ဘာတွေနဲ့။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတော့ ပိုသိတာပေါ့။ အဲတော့ ဒိုင်းဆိုတာနဲ့အပစ်ရပ်က ပြိုကွဲသွားနိုင်တယ်။ ကျည်ဆံတတောင့်ဟာ အပစ်ရပ်ပျက်စီးတဲ့ အခြေအနေကိုဖန်တီး နိုင်တယ်။ အဲဒီ့တော့ အဲဒီအပေါ်ကို ကျမတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်း ညီလာခံကအခြေခံမှာလား။ အဲဒီ့တော့ ကျမတို့ရဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံက သိပ်ကို အားနည်းသွား ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမတို့က တမူးတရှူး ကမန်းကတန်း လုပ်ချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင် ကျမတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဖြစ်သင့်တာဟာ ရာစုနှစ် တ၀က်လောက်ကို ရှိနေပါပြီ။ ဒါကျမတို့ သိပ်ပြီးတော့ ကမန်းကတန်းလုပ်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့အစဉ်အဆက်တွေအပေါ်ကျမတို့အခြေခံတာပါ။ ကျမတို့ ဒီ စပြီးဆွေးနွေးတဲ့ ၂ လ လောက်ကမှ စတာမဟုတ်ပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေး Process ပရောစက်ဆိုတာ ဟိုးကတည်းက လွတ်လပ်ရေး ရကတည်းက စတယ်လို့ပဲပြောလို့ရမှာပေါ့။
လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူတူ ကျမတို့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာကိုး။ အဲဒီတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လို့ကြိုးပမ်းမှုတွေက လွတ်လပ်ရေး သက်တမ်းနဲ့အတူတူပဲလို့ ကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျမပြောလိုတာက လိုချင်တာတွေတောင်းပါ။ ကျမတို့ပေးမယ်လို့ အာမမခံဘူး။ ကျမတို့ ဆွေးနွေးမယ်။ ဒါပေမဲ့ Calculated Risk ဆိုတာ ကိုလည်း ယူပါ။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အာမခံချက်ရှိမှလုပ်မယ်ဆိုရင် ကျမတို့ ဘယ်တော့လုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်တုန်းကမှကျမတို့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းက မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဥပမာကျမတို့ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၅ မှာ ၀င်ပြိုင်တုန်းက - ၉၀ တုန်းကကြည့်ပါလား ဘာဖြစ်သွားလဲ။ ဘာကြောင့်အခု ၀င်ပြိုင်မှာလဲ လို့မေးတယ်။
အဲဒီတော့ ခုနကပြောသွားသလိုပေါ့နော်။ အရင်တုန်းက ဖေဖေတို့နဲ့ သဘောတူညီချက်ဟာ နောက်ပိုင်းကျတော့ မတည်ဘူး။ မတည်လို့ အခု နောက် သဘောတူညီချက်အသစ် မယူသင့်ဘူး ဆိုတာ မသင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့ က ၉၀ တုန်းက ကျမတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ဟာ အဟောသိကံဖြစ်သွားလို့။ ၂၀၁၂ ၊ ၂၀၁၅ တို့ဟာ အခွင့်အရေး အလွတ်ခံခဲ့ကြမှာလား။
အလွတ်ခံခဲ့ရင်တော့ ကျမတို့မှားမယ်လို့ ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ မှားမယ်၊ မှန်မယ် ဆိုတာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျမတို့ ပြောလို့မရဘူး။ ကျမတို့စွန့်စားပြီးတော့မှ တခါဖြစ်ပြီးလို့ အမြဲပဲဖြစ်မယ်လို့ အဲဒီအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ အရှေ့တိုးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ ကျမတို့စွန့်စားပြီး လုပ်လိုက်တာပါ။
အသေးစိပ်ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျမသိတယ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးရမယ်။ ဘာပဲဆွေးနွေးဆွေးနွေး Peace Process မှာ ၀င်နိုင်ရေး ကိုဦးတည်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးပါလို့ ကျမက မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ Peace Process မှာဝင်နိုင်ဖို့ ဒို့ဘယ်လို လုပ်ကြမယ်။ ဘယ်လို အပေးအယူလုပ်ကြမလဲ၊ အဲဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲဆွေးနွေးပါလို့ မေတာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျမတို့က ပင်လုံစိတ်ဓာတ်က အင်မတန်ကျယ်ပြန့်တယ်။ သဘောတူညီချက်က နည်းနည်းကျဉ်းတယ်။ အဲဒါ ကျမတို့စဉ်းစားပြီးပြေလည်အောင် လုပ်ပါမယ်။
၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုလည်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမထိုးတဲ့လူတွေကိုလည်း တက်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးကို ဖန်းတီးချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တန်းတူညီတူတော့ အခွင့်အရေးပေးလို့မရဘူး။ ဒါကတော့ လက်တွေ့ကျပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်မှတ်မထိုးတဲ့အတူတူပဲဆိုရင်တော့ ဘယ်သူက ထိုးတော့မှာလဲ။ လက်မှတ်မထိုးတဲ့လူနဲ့ လက်မှတ်ထိုးနဲ့ လူနဲ့အတူတူပဲဆိုရင်တော့ ဘယ်သူကမှ ထိုးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။
အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဟာတခုကတော့ သတ်မှတ်ချက်ကတော့ ရှိမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့က တတ်နိုင်သမျှ အောလ်အင်ကလူးစစ် (All Inclusive) ဖြစ်အောင်လို့ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လက်မှတ်မထိုးတဲ့သူတွေ ပါဝင်ပြီးတော့ကျမတို့ ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်လုပ်နိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ ကျမတို့အဲဒါကိုလည်း စဉ်းစားထားပြီး သားပါ။
အကောင်းဆုံးကတော့ လက်မှတ်ထိုးပြီးဝင်လာရင်ကောင်းတာပေါ့။ အဲတော့ လက်မှတ်ထိုးနိုင် အောင်လို့ ဒီအန်စီအေ အပေါ်မှာပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုအလျှော့အတင်းလုပ်မလဲ။ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်မလဲဆိုတာကို ကျမက ဦးတည်စေချင်တယ်။ လက်မှတ်မထိုးဘဲနဲ့ တက်ရအောင်လုပ်ပေးဆိုရင် ဒါကတော့ မတရားဘူး။ လက်မှတ်ထိုးတဲ့လူတွေက ပြောမှာပါ ကျနော်တို့ကျတော့ လက်မှတ်ထိုးရတယ်။ သူတို့က လက်မှတ်မထိုးရဘူးဆိုရင်ကျမက ဘယ်လိုဖြေရမလဲ။